Football Khabar » १८ वर्षीय हल्यान्ड जसले एकै खेलमा ९ गोल हाने, बन्यो विश्व कीर्तिमान !
१८ वर्षीय हल्यान्ड जसले एकै खेलमा ९ गोल हाने, बन्यो विश्व कीर्तिमान !
फुटबलमा एकै खेलमा कसैले ९ गोल हाने भन्दा पत्याइहाल्न कठिन पर्छ । तर, १८ वर्षीय एक तन्नेरी खेलाडीले दुर्लभ विश्व रेकर्ड बनाएका छन् ।
पोल्यान्डमा जारी फिफा यु–२० विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा नर्वेका १८ वर्षीय युवा फरवार्ड इर्लिङ ब्राउट हल्यान्डले एकै खेलमा ९ गोल हानेर सनसनी मच्चाएका छन् ।
गत राति समूह चरणअन्तर्गत तेस्रो खेलमा नर्वेले होन्डुरसलाई १२–० को फराकिलो अन्तरले हरायो । सो खेल दौरान हल्यान्ड एक्लैले ९ गोल हानेर ‘त्रिपल ह्याट्रिक’ पूरा गरे ।
होन्डुरसमाथि सुरुबाट हाबी भएको नर्वेका लागि हल्यान्डले ९ गोल गर्दा ३ गोल अन्य खेलाडीले गरे । हल्यान्डले कूल ९ गोलमध्ये ४ गोल पहिलो हाफमा गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले १ गोल पेनाल्टीबाट गरे ।
हल्यान्डले खेलको सातौं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दा २०औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे भने ३६औं मिनेटमा पेनाल्टी गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे । फेरि ४३औं मिनेटमा गोल गर्दै उनले पहिलो हाफमै ४ गोल बर्साए ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा हल्यान्डले ५ गोल थपे । उनले ५०औं मिनेटमा पाँचौं, ६७औं मिनेटमा छैटौं गोल गरेर डबल ह्याट्रिक पूरा गर । त्यसपछि खेलको ७७औं मिनेटमा साँतौं गोल, ८८औं मिनेटमा आठौं र ९०औं मिनेटमा नवौं गोल गर्दै एकै खेलमा त्रिपल ह्याट्रिक पूरा गरे ।
हल्यान्डको ९ गोलको मदतमा नर्वेले यु–२० को इतिहासमा सबैभन्दा फराकिलो जित निकाल्दा हल्यान्डले पनि रेकर्ड बनाए । यु–२० मा एकै खेलमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको रेकर्ड अब हल्यान्डको नाममा रहेको छ । यसअघि एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै ६ गोल थियो ।
हल्यान्डका बुबा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका पूर्वखेलाडी थिए । अल्फ इन्गे हल्यान्डले विगतमा निड्स युनाइटेड हुँदै सिटीबाट पनि व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०२:५६